मधेश आन्दोलनका १४० मुद्दाको छिनोफानो, कति छ बाँकी ? - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 National राजनीति मधेश आन्दोलनका १४० मुद्दाको छिनोफानो, कति छ बाँकी ?
मधेश आन्दोलनका १४० मुद्दाको छिनोफानो, कति छ बाँकी ?
Marganugamidaily प्रकाशित समय 7:59:00 PM
राजपाका पदाधिकारीसहित २७२ जना फरार सुचीमा टिकापुर र जलेश्वर घटना गम्भीर बन्दै
काठमाडौं १३ साउन । तेस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा टिकापुर घटनासहित जम्मा दुई सय ६ थान मुद्दा लगाइएको छ । जसमा ६ सय ८२ जना आन्दोलनकारी मुछिएका छन् । दुई सय ६ मध्ये १ सय ४० थान मुद्दाको छिनोफानो गरिएको छ जसबाट २ सय ५१ जना आन्दोलनकारीले सफाई पाइसकेका छन् । तेस्रो मधेश आन्दोलनका गम्भीर घटना मध्येका ६६ थान मुद्दाको छिनोफानो गर्न बाँकी रहेको छ । छिनोफानो गर्न बाँकी रहेका ६६ थान मुद्दामा ४ सय ३१ जना मुछिएका छन् ।
पछिल्ले जानकारी अनुसार ६६ थान मुद्दा मध्ये ५२ थान मुद्दाका २ सय ७२ जना फरार सुचीमा रहेका छन् । तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र हाल राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) नेपालका पदाधिकारीहरु पनि फरार सूचीमा रहेका छन् ।
मुद्दा फिर्ता हुने छलफलका क्रममा गम्भीर प्रकृतिको मानिएको टिकापुर घटनामा राजपाका केन्द्रीय सचिव रेशम चौधरीसहितका पदाधिकारीहरु परार सुचीमा रहेका छन् भने जलेश्वरमा प्रहरीको हत्याको घटनामा महासचिव देवेन्द्र यादवसहितका नेताहरु फरार सुचीमा रहेका छन् । राजपाका पदाधिकारीहरुमाथि अधिकांश लुटपाट तथा सार्वजनि अपराधको मुद्दा लगाइएको महान्यायाधी वक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । जलेवश्वरमा मारिएका प्रहरीको घटनामा राजपाका अधिकांश केन्द्रीय पदाधिकारी परेका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केही नेताहरु पनि फरार सुचीमा रहेका छन् । गत साता सरकारले तीन दिनभित्र मुद्दा फिर्ता लगायतको काम पुरा गर्ने प्रतिवद्धता राजपालाई दिएको थियो । तर त्यस अवधिमा कुनै माग पुरा भएको छैन । मुद्दा फिर्ताका विषयमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यलयमा छलफल जारी रहेको छ । अहिले जिल्लाहरुबाट थप जानकारी ल्याउने र फरार सुचीमा रहेका नेताहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराउने कार्य भइरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
यता राजपाका महासचिव केशव झाले मुद्दा फिर्ताका विषयमा छलफल जारी रहेको बताउँदै भने, ‘अहिले सबै मुद्दाको टुँगो लागेको छैन । छलफल जारी रहेको छ । केही दिनभित्रै सबै मुद्दाको छिनोफानो हुने गरी छलफल चलेको छ ।’ राजपाका अर्का महासचिव मनिष सुमनले हालसम्म फिर्ता भएका मुद्दा मध्ये केही थान मात्र आफुहरुसँग सम्बन्धीत रहेको बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षा निकायले आ–आफ्ना बचाउका लागि केही मुद्दाहरु आफ्नै अनुसार फिर्ता लिएको दाबी गर्नु भयो ।
गम्भीर बन्दै टिकापुर र जलेश्वर घटना
टिकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता तत्काल नहुने भएको छ । राजपा र सरकारबीच जारी छलफलमा पहिले अन्य मुद्दाहरुलाई किनारा लगाउने त्यसपछि मात्र टिकापुर र जलेश्वर घटनाको विषयमा छलफल गर्ने सहमति बनेको छ । तर राजपाका नेताहरुले सबै मुद्दा एकै पटक छिनोफानो हुने पर्ने अडान लिदै आएका छन् ।
टिकापुर घटनामा मुछिकाहरुलाई उन्मुक्ति नदिन सुरक्षा निकायबाट व्यापक दबाब आइरहेको वार्तामा सहभागीहरुले बताएका छन् ।
कार्यालय सहयोगीको भरमा शिक्षक हाजरी गर्नमात्र आउ“छ हाजिरी रजिष्टरमा दुई २४ उपस्थित ४२ मात्र
गोलबजार, १५ पुस । आधारभुत विद्यालय नरहा गाउँपालीका २ पानवारीमा नियमित शिक्षक नआउँदा कार्यालय सहयोगीकै भरमा विद्यालय चल्ने गरेको छ । एक शि...